2 Tantara 32 - Ny Baiboly
Boky Faharoan'ny Tantara
2 Tantara toko 32
Ny nanafihan'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria an'i Jodà, sy ny nandravana ny tafiny.
1Taorian'ireo zavatra aman'asa marina ireo, no niainga Senakeriba mpanjakan'i Asiria, ka niditra tany Jodà, dia nanorina toby hamely ny tanàna mimanda, ary nikendry ny hahafaka azy. 2Nony hitan'i Ezekiasa fa tonga Senakeriba sady nitodika an'i Jerosalema hamely azy, 3dia niara-nidinika tamin'ny lehibe sy ny lehilahy maheriny izy, hanarona ny rano amin'ny loharano any ivelan'ny tanàna ka nanampy azy izy ireo. 4Dia vahoaka be no nivory sy nanarona ny loharano rehetra mbamin'ilay renirano mamaky eo afovoan'ny tany, nanao hoe: Ahoana no hahitan'ireo mpanjakan'i Asiria tonga atý ireo, rano betsaka? 5Nahazo hery Ezekiasa, ka namboariny avokoa ny manda rava, nohavaoziny ny tilikambo, naoriny ny manda hafa teo ivelany, nohamafisiny Melao tao an-tanànan'i Davida, ary nampanao fiadiana aman-ampinga betsaka izy. 6Nanendry mpifehy miaramila hifehy ny vahoaka izy, dia novoriny ho eo aminy teo an-kalalahana akaikin'ny vavahadin'ny tanàna ireo, ka nomeny teny manetsika ny fo hoe: 7Matanjaha sy mahereza, fa aza matahotra na manam-badi-po eo anoloan'ny mpanjakan'i Asiria sy ireo vahoaka maro be momba azy. 8Sandry nofo no momba azy, fa Iaveh Andriamanitsika kosa no momba antsika, hanampy antsika sy hitarika ny fanafihantsika. Natoky ny tenin'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà ny vahoaka.
9Rahefa izany, naniraka ny mpanompony ho any Jerosalema Senakeriba mpanjakan'i Asiria, - fa izy mbamin'ny miaramilany rehetra izany dia mbola teo anoloan'i Lakisa -, ho any amin'i Ezekiasa, mpanjakan'i Jodà, mbamin'ireo avy amin'i Jodà rehetra tao Jerosalema hilaza aminy hoe: 10Izao no lazain'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria: Inona izato itokianareo, no dia mihiboka atao fahirano ato Jerosalema ka tra-pahoriana hianareo? 11Tsy famitahan'i Ezekiasa anareo va mba hanolorany anareo ho faty mosary sy hetaheta, no nilazany hoe: Iaveh Andriamanitsika no hamonjy antsika amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria? 12Tsy io Ezekiasa io indrindra va no nandrava ny fitoerana avo sy ny otelin'ny Tompo, ka nilaza tamin'i Jodà sy Jerosalema hoe: Eo anoloan'ny otely iray monja no hiankohofanareo ary ao no hanateranareo zava-manitra. 13Ary tsy mba fantatrareo ve ny nataonay, dia izaho sy ny razako, tamin'ny firenena rehetra tamin'ny tany e? 14Moa nahavonjy tokoa ny taniny tamin'ny tanako va, ny andriamanitry ny firenena amin'ny tany? Iza amin'ny andriamanitr'ireo firenena naringan'ny razako no nahavonjy ny vahoaka tamin'ny tànako ny andriamanitrareo? 15Koa ankehitriny, aza dia mety hambosin'i Ezekiasa na hofitahiny hianareo! Ary aza matoky azy. Fa ny andriamanitry ny firenena sy ny fanjakana hafa rehetra tsy nisy nahavonjy ny vahoakany tamin'ny tànako sy ny tanan'ny razako, ka mainka tsy hahavonjy anareo amin'ny tànako izay Andriamanitrareo.
16Ny mpanompon'i Senakeriba mbola nanao teny faniratsirana an'ny Tompo Andriamanitra sy an'i Ezekiasa mpanompony. 17Izy koa nanoratra taratasy nanalany baraka an'ny Tompo Andriamanitr'Israely sy naniratsirany azy; izao no teniny: Tahaka ny tsy nahavonjen'ireo andriamanitry ny firenena amin'ny tany ny vahoakany tamin'ny tànako, no tsy hahavonjen'ny andriamanitr'i Ezekiasa ny vahoakany, amin'ny tànako koa. 18Tamim-peo avo sy amin'ny fiteny Jody, no niantsoantsoan'ireo mpanompony tamin'ny vahoaka tao Jerosalema izay teny ambony manda, mba hampitahotra sy hampivadi-po an'ireo, hahazoany ny tanàna. 19Mova tsy ny filaza ny andriamanitry ny firenena amin'ny tany, asan-tanan'olombelona ihany, no filazany ny Andriamanitr'i Jerosalema!
20Noho izany dia raikitra nivavaka Ezekiasa mpanjaka sy Izaia mpaminany, zanak'i Amosa, ka nitaraina tamin'ny lanitra izy. 21Dia naniraka anjely anankiray Iaveh ary naringan'io avokoa ny lehilahy mahery sy ny filohany mbamin'ny lehibe teo an-tobin'ny mpanjakan'i Asiria, ka lasa nody any amin'ny taniny, safo-kenatra, ity mpanjaka. Nony tafiditra tao an-tranon'ny andriamaniny izy, dia ny sasany tamin'izay naloaky ny kibony no namono azy tamin'ny sabatra. 22Ary namonjy an'i Ezekiasa sy ny mponina tao Jerosalema, tamin'ny tanan'i Senakeriba mpanjakan'i Asiria, sy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, Iaveh, nitari-dàlana azy ireo, na ho aiza na ho aiza. 23Maro ny olona nitondra fanatitra ho an'ny Tompo tany Jerosalema ary fanomezana sarobidy ho an'i Ezekiasa mpanjakan'i Jodà, izay tonga voasandratra teo imason'ny firenena rehetra hatramin'izay.
24Tamin'izany andro izany, narary efa ho faty Ezekiasa, ka nivavaka tamin'ny Tompo, dia niteny taminy Iaveh sy nanao fahagagana ho azy. 25Tsy mba namaly araka ny soa noraisiny anefa Ezekiasa fa nisondrotra ny fanahiny, ka niharan'ny fahatezeran'ny Tompo izy mbamin'i Jodà sy Jerosalema. 26Dia nanetry tena Ezekiasa noho ilay niavonavonan'ny fony, dia izy mbamin'ny mponina ao Jerosalema, ka tsy niharan'ny fahatezeran'ny Tompo izy ireo, nandritra ny andro niainan'i Ezekiasa.
27Nanan-karena amam-boninahitra be Ezekiasa. Nahangona rakitra miavosa izy, dia volafotsy, volamena, vatosoa, zava-manitra, ampinga ary zavatra mahate-hanana isan-karazany. 28Nanao trano fitehirizam-bokatra izy, na varimbazaha, na divay, na diloilo, tranom-pihinanam-biby ho an'ny biby fiompy isan-karazany, ary nanana biby fiompy ao an-tranom-biby. 29Nanao tanàna maro ho azy izy, ary nanana andiany maro izy tamin'ny omby sy ny ondry, fa nomen'Andriamanitra harena be dia be. 30Ezekiasa io ihany koa, no nanarona ny fivoahan'ny rano any ambony tamin'ny ranon'i Gihona, ka nampandeha azy hidina mankany andrefan'ny tanànan'i Davida. Nahomby Ezekiasa tamin'izay rehetra nataony. 31Tamin'ireo iraka nirahin'ny lehiben'i Babilona, hanontany azy ny amin'ny zava-mahagaga natao teo amin'ny tany, hany nandaozan'Andriamanitra azy, dia ny hizahany toetra azy, mba hahalalany ny ao am-pony rehetra.
32Ny asan'i Ezekiasa sisa, mbamin'ny asany momba ny fivavahana, dia efa voasoratra ao amin'ny Fahitan'Izaia mpaminany zanak'i Amosa sy ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'i Jodà sy Israely. 33Dia nodimandry any amin'ny razany Ezekiasa, ka nalevina teo amin'ny fitoerana ambony indrindra, amin'ny fasan'ny taranak'i Davida, ary tamin'ny nahafatesany, dia niara-nanome voninahitra azy Jodà rehetra sy ny mponina ao Jerosalema. Manase zanany no nanjaka nandimby azy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0109 seconds